ဟားခါးနဲ့ ဖလမ်းကြားမှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ စစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး စစ်သား ၆ ဦးသေဆုံး၊ ၁၀ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရ၊CDF ၁ဦးကျ
လားရှိုးခရိုင် မိုင်းယော်တိုက်နယ်မှာ ကိုးကန့်တပ် MNDAA နဲ့ စစ်တပ် တိုက်ပွဲဖြစ်
KIA တပ်သားတွေအလင်းဝင်ကြဖို့ ပူတာအိုခရိုင် နောင်မွန်မှာ စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူ့စစ်တွေ ဝါဒဖြန့်စာလိုက်ကပ်
KIA ကိုတိုက်ခိုက်ရန် ခေါင်လန်ဖူးဌာနေပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က သင်တန်းတက်ရန်လိုက်လံစည်းရုံးနေ
မိုင်းရယ်မြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၄၅ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
လားရှိုး၊ အမှတ် ၁၂ မူလွန်ကျောင်းက CDM ဆရာမတဦး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာကနေ ဖယ်ရှားခံရ
ကြံခင်းမြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၃၄ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
မြန်အောင်မြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၁၁၆ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
တနင်္သာရီတိုင်းက CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
သိန္နီမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက CDM ဝန်ထမ်းများကို ကျန်းမာရေးဦးစီးမှူးက ခြိမ်းခြောက်ဖိအားပေးနေ
ပေါင်မြို့နယ်တွင် CDM ဆရာ/မများကို ဂုဏ်ပြုကြောင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်
ဒိုက်ဦးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက် CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းများကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
တွံတေးမြို့ကိုရောက်လာတဲ့ ရေတပ်သားနှစ်ဦး CDM တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အတွက် ခေတ်မီလက်နက်များတပ်ဆင်ပေးနိုင်ရေး ပြင်ဆင်နေကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် ဦးမန်းဝင်းခိုင်သန်း မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြား
တိုက်ကြီးမြို့နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် ဖွဲ့စည်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ
သာယာဝတီမြို့၊ ကြံ့ဖွံ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေအိမ်နဲ့ ပညာရေးမှူးရုံးအနီးမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွား
မေ ၁၆ ရက်က မိုးကုတ်မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးနဲ့ ဗျူဟာကုန်းအနီးက ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမှာ ပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်
မူဆယ်၊ စစ်တပ်ပိုင် အင်းဝဘဏ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားလို့ ရဲနှင့်ပြည်သူ့စစ် ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ
မတ္တရာမြို့နယ် နေအိမ်အချို့ဖျက်ဆီးခံရပြီး ငွေကြေးနဲ့ ရွှေထည်များ စစ်တပ်က အဓမ္မလုယူ
မေ ၁၆ ရက်၊ တီးတိန်မှာ စစ်သားများပစ်ခတ်သောင်းကျန်းလို့ ပြည်သူ ၂ ဦး ကျည်ထိမှန်ကျဆုံး
မင်းတပ်မြို့တွင် စစ်သားများပစ်ခတ်သောင်းကျန်းလို့ ကလေးငယ်တဦး ကျည်ထိမှန်၊ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများ လုယက်ခိုးယူနေ
မိုးမောက်မြို့နယ်တွင် တောင်ယာစိုက်သွားသူတဦး မိုင်းနင်းမိပြီး ခြေထောက်ပြတ်ဒဏ်ရာရ
နမ္မတူမြို့နယ်၊ မိုင်းမုကျေးရွာအုပ်စု ဆန်ခါရွာသားတဦး မိုင်းနင်းမိပြီး သေဆုံး
တောင်ဒဂုံတွင် စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခံရသည့် အမျိုးသားတဦး သေဆုံးသွားပြီး ပုပ်ပွနေသည့်အလောင်းပြန်ပေး
ကျောက်မဲမြို့တွင် အမျိုးသား ၂ ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွား
ပုဒ်မ ၅၀၅ နဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်များကို အမှုပိတ်ပေးခ စစ်တပ်က သိန်းရာချီတောင်းနေ
ဖားကန့်မှာ စစ်တပ်က ဆက်ကြေးကောက်ပြီး တရားမဝင်ကျောက်စိမ်းတူးဖော်သူများကို ခွင့်ပြုနေ
မြစ်ကြီးနား၊ ရွှေစက်တော်ရပ်ကွက်က လူငယ် ၄ ဦး ဆန္ဒပြပွဲပါဝင်သည်ဟုဆိုကာ စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
ကလေးမြို့၊ တကသခေါင်းဆောင်များခိုလှုံရာနေအိမ်ကို စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်စီးနင်းလို့ ၂ ဦးဖမ်းဆီးခံရ
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း စစ်တပ်၏ ယုတ်မာမှုများကြောင့် ကျဆုံးသူ ၈၀၀ ခန့်နှင့် မတရားဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၀၀၀ ကျော်ရှိလာ
မယ်စကြဝဠာပြိုင်ပွဲမှာ အလှမယ်သူဇာဝင့်လွင်က ချင်းရိုးရာဝတ်စုံနဲ့ “Best National Costume” ဆုကို ဆွတ်ခူး
ကူကီးတပ်မတော်ကို UKSC/UKSA အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာ
မန္တလေး၊ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်က နေအိမ်တလုံး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
စစ်ကောင်စီဆက်လက်အုပ်ချုပ်ပါက ပြည်သူအားလုံးလက်နက်ကိုင်လိမ့်မည်ဟု KIA ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူပြောကြား
မိုးကောင်းမြို့နယ်ပြည်သူများ မင်းတပ်မြို့နဲ့တသားတည်းရပ်တည်ကြောင်း ချီတက်ဆန္ဒပြ
မုဒုံမြို့နယ် NLD အမတ်၏ ညီမတဝမ်းကွဲဖြစ်သူကို မုဒုံရဲများဖမ်းဆီးသွား
ကသာစျေးကို စစ်တပ်က ဝင်စီးပြီးနောက် ၇ ရပ်ကွက်တွင် နေအိမ်တလုံးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
စစ်ကိုင်း၊ ထုံးဘိုရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား
စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတာ ဗန်းမော်သာသနာ့နယ်က ကတ်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးတပါး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ
ထားဝယ်ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရပြီး ၇ ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံရ၊ ၁ ဦး ရာဘာကျည်ထိ
ပြည်ခရိုင်၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
မင်းအောင်လှိုင်ရောက်ရှိနေသည်ဟု သတင်းထွက်နေသည့် မန္တလေးမှာ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားတဲ့ကြားက တကသ သပိတ်စစ်ကြောင်း ချီတက်ဆန္ဒပြ
ဝိုင်းမော်ညသပိတ်တွင် စစ်တပ်ကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံရသူတဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ
ဖာကန့်တွင် မြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့် ပျောက်ဆုံးနေသူများ ရှာမတွေ့သေး
မူဆယ်မြို့တွင် အမျိုးသမီးတဦး နေအိမ်တွင် ဓားပြတိုက်ခံရပြီး အသတ်ခံထားရ
စစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးမှုများရှိသော်လည်း နိုင်ငံအဝှမ်း စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးနှင့် စစ်ကျွန်ပညာရေးစနစ် အလိုမရှိကြောင်း ချီတက်ဆန္ဒပြ
ထားဝယ်သပိတ်ကြောင်းကို ကားဖြင့်တိုက်၍ဖြိုခွဲ၊ ၇ဦးခန့်ဖမ်းခံရ
ထိုင်းကလွှဲပြောင်းလာသည့် ပြစ်ဒဏ်စေ့အကျဉ်းသား ၁၀၁ ဦးတွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူ ၄ ဦးပါဝင်
ထိုင်းအကျဉ်းထောင်များတွင် ၅ရက်အတွင်း ကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူ ၁သောင်းနီးပါးရှိ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် - PDF ကို စစ်တိုင်း ၅ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းကြောင်း NUG အစိုးရကြေညာ
တောင်ဒဂုံတွင် ကျောင်းမီးရှို့သည်ဟုဆိုကာ CDM ဆရာမတဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
ရေကြည်မြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၃၄ ဦးတာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
နေပြည်တော်က ရဲဝန်ထမ်းတဦး CDM တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်လာ
ပေါက်တောမြို့နယ် CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၁၅ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
မိုးညှင်းမြို့တွင် CDM လှုပ်ရှားမှုပါဝင်တဲ့ဆရာမတဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွား
ဖြူးမြို့နယ်က ပညာရေးဝန်ထမ်းပေါင်း ၈၀၀ ကျော် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ရွှေပြည်သာ စစ်ကြောရေးစခန်းအနီးက အမှိုက်ကန်မှာဗုံးပေါက်ကွဲပြီး လူ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
စစ်ကိုင်းမြို့ကို မင်းအောင်လှိုင်ရောက်ရှိနေချိန် ပညာရေးကောလိပ်ရှေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး အမျိုးသမီးတဦးဒဏ်ရာရ
တာမွေအဝိုင်းထိပ် မော်တော်ပီကယ်ရုံးအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
တာချီလိတ် ကြံ့ဖွံ့ရုံးတွင် မပေါက်ကွဲသေးသည့် ဗုံးတလုံးတွေ့ရှိ
လမ်းမတော်မြို့နယ် အမှတ် ၃ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအနီး ဗုံး ၂ ကြိမ်ပေါက်ကွဲပြီး ရဲ ၂ ယောက်ဒဏ်ရာရ၊ ရေလာခပ်သူများကို သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်
မိုးကုတ်မြို့ သဖန်းပင်ရပ်ကွက်က စာသင်ကျောင်းမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွား
ယမန်နေ့ညပိုင်းက မြောက်ဥက္ကလာ၊ သန္တာ (င) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
မေလ ၁၈၊ ပဲခူးမြို့ ကညနရုံးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်ရဲစခန်းအနီး ဗုံး ၂ လုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မံစီမြို့နယ်တွင် KIA နှင့် စစ်တပ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီး လက်နက်ကြီးအသုံးပြုမှုများရှိ
ဗန်းဗော်မှာ စစ်အင်အားထပ်တိုးနေသောကြောင့် တိုက်ပွဲများထပ်မံ ပြင်းထန်လာနိုင်ဟု KIO ပြော
ကွတ်ခိုင်မြို့အနီးတွင် စစ်တပ်၏ ဆီဘောက်ဆာကားတစီးကို KIA ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီး၊ ၂ ရက်အတွင်း ကား ၇ စီးခန့်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့
ကွတ်ခိုင်မြို့အနီး စစ်တပ်နဲ့ KIA တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
မင်းတပ်မြို့တိုက်ပွဲတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးများအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေ
စစ်တပ်ကထွက်ပြေးတဲ့ အရာရှိနဲ့ စစ်သည်ပေါင်း ထောင်နဲ့ချီရှိလာ
လမ်းမတော်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီး ဦးခေါင်းပွင့်ထွက်ဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံး
ဒိုက်ဦးတွင် စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် လူတစ်ဦးကျည်ထိမှန်သေဆုံး
စစ်တပ်က မင်းတပ်မြို့ကိုသောက်သုံးရေဖြတ်တောက်ပစ်လို့ ပြည်သူများဒုက္ခရောက်နေ
စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပေးရန် သြဇီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံ မြန်မာအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ၃၉၀ တောင်းဆို
မော်လမြိုင်အပါအဝင် အခြားတက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသား/သူ ၈ ဦးခန့်ဖမ်းဆီးခံရ
မင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝင်များနှင့် သားသမီးများ ၁၆ ဦးခန့်ကို အမေရိကန်ပိတ်ဆို့အရေးယူ
RCSS/SSA အနေနဲ့ ရှမ်းပြည်သူများကို ကာကွယ်ပေးရန် ဆန္ဒဖော်ထုတ်
နမ္မတူမြို့နယ်မှာ SSPP က လူထုနဲ့တွေ့ဆုံပြီး မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ နေအိမ်များအတွက် သိန်း ၆၃၀ ပေးအပ်
ကန်ပက်လက်မြို့တွင် စစ်တပ်အင်အားတိုးထားသောကြောင့် ဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
တီးတိန်မြို့ကို စစ်ကောင်စီက အကြမ်းဖက်စစ်အင်အားပြ
အမေရိကန်ရောက် ချင်းလူမျိုးများက အလှမယ်သူဇာဝင့်လွင်အတွက် ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပပေး
စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလမ်းတခုဖြစ်တဲ့ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းကို UK ပိတ်ဆို့အရေးယူ
မင်းတပ်တိုက်ပွဲတွင် စစ်တပ်က ဓာတုလက်နက်အသုံးပြုဖွယ်ရှိဟု မင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြော
မင်းတပ်၊ စစ်တပ်ထံမှ CDF က တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ စစ်ကားပေါ်မှာ မူးယစ်ဆေးနှင့် ကာမဆေးများပါဝင်
မြန်မာကိုလက်နက်ရောင်းချခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်းရပ်ဆိုင်းရန် မဲခွဲဆုံးဖြတ်မည့် ကုလအထွေထွေညီလာခံ ရက်ရွှေ့ဆိုင်းထား
မင်းအောင်လှိုင် မန္တလေးကိုရောက်ရှိနေစဉ် ဆန္ဒပြသပိတ်စစ်ကြောင်းများ အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ ချီတက်
ရွေးကော်အစည်းအဝေးမတက်ရေး ပြည်သူ့ပါတီတွင်းသဘောထားကွဲလွဲ၊ မန္တလေးတိုင်းအလုပ်မှုဆောင်များနှုတ်ထွက်
စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပွဲ SNLD ပါတီ မတက်ရောက်
ရွှေကူတွင် စစ်ကားများဓာတ်ပုံရိုက်လို့ ဖမ်းဆီးခံရသူနှစ်ဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာ
ပူတာအိုမြို့နယ်၊ မလိခမြစ်ဘေးတွင် တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်နေသူများကို ဒေသခံများသွားရောက်ကန့်ကွက်
ဒဏ်ရာရစစ်သားများနဲ့ စစ်သား ၁၀၀ ကျော်ပါဝင်တဲ့ သင်္ဘောတစီး ရွှေကူမြို့ကိုရောက်ရှိလာ
ကရင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကို အကူအညီများပေးနိုင်ရန် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ကော်မတီတရပ်ဖွဲ့စည်း
ယနေ့ ၁၈ရက်နေ့အထိ ပြည်သူ ကျဆုံး ၈၀၅၊ ဖမ်းဆီး ၅၂၅၇ ရှိ
တမိုက်သာရွာအားမနက်က ဝင်မွှေ၊ ရွာခံ၃ယောက်ဖမ်းဆီး
မြို့အဝင်နေရာများတွင် စကစများ စောင်ကြပ်၍ ဖုန်းများကို ယူငင်စစ်ဆေး
ဆင်ချောင်း၊ညောင်တိုရွာများသို့ စကစအဖွဲ့ ဝင်ရောက်ခဲ့၊ ည၈:၃၀ခန့်တွင် ကိုင်းရွာ‌တာဘောင်သို့ရောက်ရှိ၍ သေနတ် ၆ချက်ခန့်ဖောက်ခဲ့
ဧရာဝတီမြစ် အနောကမဖက်ကမ်း ပန်းညို့ရွာ ကမ်းဖက်တွင် စစ်သင်္ဘောအငယ်စားတစ်စီးတစ်နေကုန်ဆိုက်ကပ်ထား
၎င်းနေရာတဝိုက်တွင် မြစ်ကိုဖြတ်သန်းခွင့်မပြုတော့ဟု သိရ
သီပေါနဲ့နမ္မတူမှာ RCSS နဲ့ SSPPတိုက်ပွဲဖြစ်
စစ်တပ်မှဓါတုလက်နက်အသုံးပြုနေသည်ဟု သံသယရှိကြောင်းမင်းတပ်CDF ပြော
ဒေသခံများကို အသိမပေးဘဲ စစ်တပ်နဲ့ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် ဒေသခံများကို ဟားခါး CDF တောင်းပန်
သိန္နီမြို့ ရေပူအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တခုက ပစ်ခတ်စီးနင်း၊ ဝန်ထမ်းများထွက်ပြေး
တာချီလိတ် ကြံ့ဖွံ့ရုံးတွင် အသံဗုံးတွေ့ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အပြစ်မဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆိုမြို့တွင် လူငယ်နှစ်ဦးကို စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး
ယမန်နေ့ညက ဗန်းမော်စျေးအတွင်း စစ်သားများဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး ပစ္စည်းများခိုးယူခဲ့
အထက်မင်းလှမြို့အနီးရှိ ဧရာဝတီမြစ်ထဲတွင် စစ်ကောင်စီကိုလာဘ်ထိုးပြီး တရားမဝင်ရွှေတူးဖော်မှုများပြုလုပ်နေ
ပြည်မြို့တွင် စစ်တပ်က အပြစ်မဲ့ပြည်သူတဦးကိုပစ်သတ်ခဲ့ပြီး ယနေ့မနက် အလောင်းလာထုတ်ဖို့ပြော
သရက်မြို့ စည်ပင်ရုံးတွင် ဗုံး ၂ ကြိမ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ပြည်သူ ၃ ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွား
ပဲခူးတွင် အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေး ၂ ဦးနဲ့ လူငယ် ၁ ဦးကို စစ်တပ်က ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး
ပဲခူးတွင် ဆိုင်ထိုင်နေသည့်လူငယ်တဦးကို စစ်တပ်က အကြောင်းမဲ့ပစ်သတ်သွား
မိုးကုတ်မြို့ သဖန်းပင်ရပ်ကွက်ကပြည်သူ ၃ ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွား
ရွှေကူမြို့တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦး၏ နေအိမ်တံခါးကို စစ်တပ်ကဖျက်ဆီးပြီး နေအိမ်တွင်း ဝင်ရောင်ရှာဖွေ
ပြည်သူများ နိုင်ငံရေးစိတ်မဝင်စားစေရန် လောင်းကစားဝိုင်းများကို စစ်ကောင်စီက စီမံချက်ဖြင့်တရားဝင်ဖွင့်ခိုင်းနေ
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်က တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ LGBT တဦးကို စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီး
ဖုန်းကြားဖြတ်နားထောင်ရန် အာဏာမသိမ်းခင် စစ်တပ်ကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့
တီးတိန်မြို့နယ်က အခြေခံပညာရေး (သင်ကြား/စီမံ) ဝန်ထမ်း ၁၀၈၇ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
CDM ပြုလုပ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံဖက်ရှောင်တိမ်းနေတဲ့ တမူးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက သူနာပြုဆရာမကြီး ကွယ်လွန်
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးခရိုင်က CDM အထက်တန်းပြ ၃၄၀ ဦး တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်က CDM ဝန်ထမ်း ၄၆ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ရန်ကုန်တိုင်းပညာရေးနှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှ CDM ညွှန်မှူးအပါအဝင် ၇ ဦး တာဝန်မှရပ်ဆိုင်းခံရ
ကလေးမြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၆၅၇ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ဖောင်းပြင်မြို့နယ်တွင် CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၂၇၄ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ကျောက်မဲမြို့တွင် CDM မလုပ်သည့် ဆရာ/မများကို စစ်တပ်ကခေါ်ပြီး ကျောင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်း
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်မပြုနိုင်ဟု KNU ကြေညာ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာကြရန်နဲ့ ခရီးမသွားကြရန် US သံရုံးသတိပေး
မြန်မာနိုင်ငံကို ခရီးသွားရန်အန္တရာယ်ရှိမှု အမြင့်ဆုံးအဆင့်၄အဖြစ် USသတ်မှတ်
မင်းတပ်မှာ အကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ ကလေးသူငယ်များကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ စစ်တပ်ကို ကုလသမဂ္ဂတိုက်တွန်း
မင်းတပ်က စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို အကူညီပေးနိုင်ရေး စတင်ဆောင်ရွက်နေဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးပြော
တီးတိန်မြို့ အဝင်အထွက်နားရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ် မီးလောင်ကျွမ်း
မိုးလေဝသသတင်းများကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမည်
အိန္ဒိယနယ်စပ်၌ ခိုလှုံသူမြန်မာနိုင်ငံသား ၁၅၄၀၀ကျော်ရှိလာ
SSPP/SSAမှ နမ္မတူတိုက်ပွဲအတွင်းပျက်စီးသွားသောအိမ်များအတွက် သိန်း၆၃၀ထောက်ပံ့
ချင်းပြည်နယ်၌ ဟားခါးမှလွဲ၍ ကျန်မြန်မာ့စီးပွါးရေးဘဏ်များ ယာယီပိတ်ထား
ဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ထား‌ပေးရန် UNHCR မှမြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကိုတိုက်တွန်း
ရွေး/ကော်အစည်းအဝေး SNLDနဲ့ ANPမတက်၊ ပြည်သူ့ပါတီ PP တက်မည်
တီးတိန်မြို့တွင် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံး
သာကေတသပိတ် လူစုနေစဉ် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရပြီး ၃ ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံရ
ထိုင်းတောင်ပိုင်းစက်ရုံက မြန်မာလုပ်သား၅၀ခန့်မှာ COVIDတွေ့
အိန္ဒိယတွင် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ချိတ် သင်္ဘောနစ်မြှုပ်ပြီး လူရာချီပျောက်ဆုံးနေ
မြန်မာကို ဦးတည်မည့်မုန်တိုင်း၁ခု ရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်
တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်လို့ လူ ၁၀ ဦးထက်မနည်းသေဆုံး
တာမွေ အထက ၁အနီး ဗုံး၂လုံးဆင့်ပေါက် စကစများ အထိအခိုက်ရှိ
စစ်တပ်က ပစ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီး ၃ လုံး ထိုင်းနိုင်ငံဖက်ခြမ်း ကျရောက်ပေါက်ကွဲ
ဟားခါး CDF နဲ့ စစ်တပ် ၂ ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်း စစ်သား ၇ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၉ ဦးဒဏ်ရာရ
မနေ့က CDF-မင်းတပ်နှင့်တိုက်ပွဲ၌ စစ်တပ်မှ ၃ဦးသေ
ဆွမ်ပရာဘွမ်တွင် စစ်တပ်နဲ့ဆက်စပ်နေသည့် ဆီဘောက်ဆာကားနှစ်စီး ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခံရ
ဟားခါး CDF အဖွဲ့၏ ဆိုင်ကယ်အစီး ၃၀ ကျော်ကို စစ်တပ်က မီးရှို့ဖျက်ဆီး
နာဂဒေသ၊ လေရှီးမြို့နယ်တွင် စစ်စခန်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး ဗိုလ်ကြီး ၁ ဦး၊ ဒုဗိုလ် ၁ ဦးအပါအဝင် ၄ ဦးသေဆုံး
ဖားကန့်၊ စစ်သားများလာရောက်တပ်စွဲလေ့ရှိသည့် ယုဇနကုမ္ပဏီပိုင်အဆောက်အဦများကို KIA လာရောက်ဖျက်ဆီး
PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို စစ်သင်တန်းမပေးဖို့ KNU ကို စစ်ကောင်စီကန့်ကွက်စာပို့
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ကလေးငယ်တဦး သေဆုံး
စစ်ကိုင်းမြို့မစျေးအနီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးဒဏ်ရာရ
ဖျာပုံမြို့နယ် ဒေါ်ညိမ်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
တောင်ဒဂုံရဲစခန်းအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး ရဲတဦးသေဆုံး
ပြည်မြို့၊ ကြံ့ဖွံ့ရုံးအပါအဝင် ၃ နေရာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ရန်ကုန်၊ makro ကုန်တိုက် ကားပါကင်ထဲတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ရွှေကူတွင် လက်လုပ်မိုင်းဟုယူဆရသည့်အရာများ ၂ နေရာတွင်တွေ့ရှိ၊ စစ်တပ်ကလာရောက်သိမ်းယူ
လွိုင်ကော်၊ ပန်ကန်းကျေးရွာတွင် လက်လုပ်ဗုံးတွေ့ရှိပြီး စစ်တပ်ကလာရောက်ဖောက်ခွဲ
တာမွေ အထက-၁ အနီးဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီး စစ်ကောင်စီလက်ပါးစေအချို့ဒဏ်ရာရ
NUG အစိုးရက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာ ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်း
ကချင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကို NUG အစိုးရ ထောက်ပံ့ကူညီမှုများပြုလုပ်
ဧရာဝတီတိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ DSG ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာ
ဧရာဝတီတိုင်း ၉ မြို့နယ်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များ ဖွဲ့စည်းပြီးစီး
ဒလန်တွေက စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေလို့ ပုသိမ်မြို့ကပြည်သူများ နေ့စဉ်ဖမ်းဆီးခံနေရ
သပိတ်ကျင်းမြို့နယ် ညောင်ကြီးရွာက လူတစ်ဦးကို စစ်တပ်က ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်
စစ်ကောင်စီက စစ်သား သားသမီးများကို တနေ့ ၇၀၀၀ ကျပ်နှုန်းနဲ့ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူခိုင်း
ရွှေကူတွင် ဧည့်စာရင်းအကြောင်းပြပြီး စစ်တပ်က ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေ
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့က လူငယ် ၄ ဦးကို အမည်မသိလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား
ရေစကြို၊ ဇီးတောရွာက NLD ရပ်ကျေးဥက္ကဌနေအိမ်ကို စစ်တပ်ကဖျက်ဆီး၊ ရွာသားများကို ရိုက်နှက်
ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ် NLD အမတ်နဲ့ ဒေသခံ ၃ ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
မိုးကုတ်မြို့ အောင်သစ်လွင်ရပ်ကွက်၊ ၈ တန်းကျောင်းသားအပါအဝင် ၄ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
လွိုင်ကော်၊ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဆလိုင်းအပါအဝင် လူငယ် ၅ ဦးကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ပြည်သူများ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်အချက်အလက်များ ကြားဖြတ်ခိုးယူထောက်လှမ်းဖို့ စစ်ကောင်စီကြိုးပမ်းနေ
ပဲခူး၊ ဥသျှင်ပင်ရွာက ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆရာတစ်ဦးကို စစ်တပ်ကပစ်သတ်ခဲ့ပြီး ရွာသားသုံးဦး ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံရ
စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကို ကူညီရန်ပြင်ဆင်နေသည့် သီပေါမြို့က လူငယ် ၁၀ ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
မိုးကုတ်မြို့ ဓာတ်ပုံဆရာနှင့် သူ၏ ညီတော်စပ်သူကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပန်းကြိုင်ရွာကို စစ်တပ်ကပစ်ခတ်သောင်းကျန်းလို့ ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးနေရ
ပုသိမ်မြို့က ပရဟိတသမား ၃ ဦးကို စစ်တပ်ကအရပ်ဝတ်များနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီး
ပြည်မြို့ အထက-၅ ကျောင်းရှေ့တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးကို စစ်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ ပစ်သတ်
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင် ပြည်သူ ၆ ဦးကို စစ်တပ်နဲ့ရဲက ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်လို့ ၁ ဦးသေဆုံး
ဒီးမော့ဆိုမြို့တွင် နာရေးအိမ်တစ်ခုကို စစ်တပ်ကဝင်စီးပြီး ပြည်သူ ၈ ဦးဖမ်းဆီးသွား
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ဆည်မြောင်းကျေးရွာနေ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွား
ရေစကြိုမြို့နယ် ဇီးတောရွာကို စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်သောင်းကျန်းပြီး ဖျက်ဆီးမှုများပြုလုပ်
စလင်းမြို့နယ် မြေနုကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းကို စစ်တပ်ကဝင်စီး၊ လူငယ် ၅ ဦးဖမ်းဆီးခံရ
မိုင်းလားမြို့မှ CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၂၂ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
မိုးကောင်းမြို့နယ် CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၄၇၁ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၈၅ ဦး တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ဘိုကလေးမြို့နယ် CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၂၀၀ နီးပါး တာဝန်မှရပ်ဆိုင်းခံရ
ပခုက္ကူမြို့က CDM မီးရထားဝန်ထမ်း ၂၉ ဦး တာဝန်မှ ရပ်ဆိုင်းခံရ
အခွန်ဦးစီးဌာနက CDM ဝန်ထမ်းများ ချေးငွေပြန်ဆပ်ကြရန် ဖိအားပေးခံနေရ
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် အမေရိကန်သို့ မြန်မာပို့ကုန် ၆၀% ကျော်ကျဆင်း
စက်ရုံအများစုရပ်နားသွားလို့ ဝန်ထမ်းများနေရေးစားရေးဒုက္ခရောက်၊ ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရ
သီပေါမြို့နယ် ဝမ်စိမ်းကျေးရွာကို စစ်ဘေးရှောင် ၂၅၀၀ ကျော်ရောက်ရှိလာပြီး ဆေးဝါးနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ အရေးပေါ်လိုအပ်
မြောင်းမြမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို စစ်တပ်က မင်းတပ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့
ပုသိမ်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှေ့ လုံခြုံရေးယူနေတဲ့ စစ်သားတစ်ဦး အုတ်နီခဲနဲ့ထုခံရ
စစ်ကောင်စီ၏ လေတပ်အကြီးအကဲဦးဆောင်သောအဖွဲ့ ရုရှားနိုင်ငံသွားရောက်မည်
လွိုင်ကော်၊ ဘီလူးချောင်းအတွင်း ရေနစ်သေဆုံးသူ ၃ ဦးအနက် ၂ ဦးရုပ်အလောင်းပြန်တွေ့
တိုကျို မြန်မာသံရုံးက အတွင်းဝန်နှစ်ဦးကို စစ်ကောင်စီက အလုပ်ထုတ်ပယ်
ကျိုင်းတုံ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်း
ပုသိမ်တက္ကသိုလ် ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်း၊ စစ်ကောင်စီခန့် အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကို ဖျက်သိမ်း
မင်းတပ်တွင် စစ်ရှောင်စခန်း ၄ ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတကာမှ အန္တရာယ်ကင်းမဲ့ဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန်တောင်းဆို
ဂျပန် Aeon ကုမ္ပဏီက ရန်ကုန်တွင် အကြီးမားဆုံးရှော့ပင်းမောတည်ဆောက်မည့် စီမံကိန်းကို ဆိုင်းငံ့
ဧရာဝတီတိုင်းက လွှတ်တော်အမတ်များနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၅၀ ခန့်ကို စစ်တပ်က ပုဒ်မကြီးများတပ်ပြီးတရားစွဲ
ကချင်ပြည်နယ် ချီဖွေမြို့ရောက် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ နေရပ်ပြန်ပါက ပြည်သူ့စစ်ထဲဝင်ရန် ဖိအားပေးခံရ
မြေပုံမြို့နယ် ကမ်းထောင်ကြီးမြို့မှာ နေအိမ် ၁၄ လုံးမီးလောင်၊ လူ ၆၈ ဦးခန့် မီးဘေးသင့်
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ကလေးသူငယ် ၅၃ ဦးသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ၇၃ ဦးဖမ်းဆီးထားဟု AAPP ထုတ်ပြန်
လွိုင်ကော်မြို့တွင် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့လူနာတင်ယာဉ်တစီး မီးပုလင်းနဲ့ပစ်ခံရ
တာချီလိတ်မြို့ ဟောင်လိတ်မီးပွိုင့်လမ်းဆုံတွင် စစ်ကောင်စီ၏ ဝါဒဖြန့်ဆိုင်းဘုတ် မီးလောင်ကျွမ်း
တာချီလိတ်တွင် ကုန်စိမ်းသည်တဦးကို လူငယ်အဖွဲ့တစ်ခုက ရိုက်နှက်ပြီး ဆိုင်ကယ်လုယူမှုဖြစ်
နောက်နှစ်ရက်အကြာတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်း မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ဟု မိုးဇလကြေညာ
မြောင်းမြထွေအုပ် မင်းတပ်ပြောင်းရ၍ ပျော်ရွှင်စွာဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပ
ချီဖွေစစ်ဘေးရှောင်များနေရပ်ပြန်လျှင် စစ်တပ်မှဖွဲ့သော ပြည်သူ့စစ်ဝင်ရန် ဖိအားပေး
ကလေး ၁၂သန်းကျော်ပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုကို လက်မခံဟု UNဆို
ရဟတ်ယာဉ်ပြပွဲတက်ရန် လေတပ်ဦးစီးချုပ် ရုရှရောက်
ကန္တာရဝတီတိုင်း သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကို ပြည်ပရောက်ကရင်နီများသို့ယာယီလွှဲ
ဖလမ်းတွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးသူ အပါအဝင် ၄ ဦး ကိုဗစ်တွေ့
ဒီပဲယင်းမြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၈၀၀ ကျော်တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ခန္တီးမြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၁၆၂ ဦး တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
တန့်ဆည်မြို့နယ်က CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၉၀၀ ကျော် တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခံရ
ဝက်လက်မြို့နယ်တွင် အလုပ်ထုတ်ခံရသည့် CDM ပညာရေးဝန်ထမ်း ၁၁၀၀ ကျော်ရှိလာ
မင်းတပ်အနီး ပူကွန်းရွာမှာ တပ်စွဲဖို့လာတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ မင်းတပ် CDF တပ်ဖွဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်
ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့ ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF နဲ့ စစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး ဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါအဝင် စစ်သား ၆ ဦးသေ၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
နမ့်ဆန်မြို့နယ်၊ လဝကရုံးရှေ့ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး ဗိုလ်မှူး ၁ ဦး၊ ဗိုလ်ကြီး ၁ ဦး၊ ရဲမှူး ၁ ဦးအပါအဝင် ၅ ဦးသေဆုံး
စမ်းချောင်းမြို့နယ် အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံအနီးမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
တောင်ကြီးမြို့မစျေးမီးပွိုင့်အနီး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး ရဲတပ်သား ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ ၁ ဦးစိုးရိမ်ရ
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဗားကရာလမ်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွား၊ စစ်သား ၁ ဦးသေဆုံး
တာမွေ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက် စျေးလေးမှတ်တိုင်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာဘီယာရုံးဝင်း လက်လုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ဒီးမော့ဆိုမြို့မှာ ထွေအုပ်ရုံးနဲ့ အားကစားရုံးမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး ပစ်ခတ်မှုများရှိနေ
ပျူစောထီးအမည်ခံ စစ်ကောင်စီလက်ကိုင်တုတ်အဖွဲ့များကို မြို့နယ်ထွေအုပ်များက ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းနေ
စစ်အစိုးရက လောင်းကစားဝိုင်းများ စီမံချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်လာလို့ ပြည်သူများစိုးရိမ်နေ
NLD ပါတီကို ဖျက်သိမ်းမည်ဟု စစ်ကောင်စီလက်ပါးစေ ရွေးကော်ဥက္ကဌပြော
တောင်ငူခရိုင် NLD ရုံးကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အကြမ်းဖက်စီးနင်းရှာဖွေ
တနိုင်းမြို့နယ် NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွား
ပြည်ခရိုင်၊ ဥသျှစ်ပင်မြို့မှာ စစ်တပ်က လူငယ်တစ်ဦးကိုပစ်သတ်၊ တဦးဒဏ်ရာရပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
ပြည်မြို့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ၁ ဦးနှင့် အရပ်သား ၃ ဦးကို လက်လုပ်ဗုံးဖောက်ခွဲသည်ဟု စွတ်စွဲကာ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ဒီးမော့ဆို မြို့မရဲစခန်း ယနေ့ညနေ ၃ နာရီခန့်က PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လာရောက်တိုက်ခိုက်
အင်းစိန်တွင် ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၁ ဦးနှင့် မိသားစုဝင် ၂ ဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
မင်းတပ်မြို့ ဆည်မြောင်းဌာနက CDM ဝန်ထမ်းတဦးကို စစ်တပ်က ပစ်သတ်
မြစ်ကြီးနားတွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၂ ဦးအပါအဝင် ၅ ဦးကိုစစ်တပ်က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးသွား
မိုးမောက်မြို့နယ်တွင် စစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီးအချို့ကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီး နေအိမ်အချို့ပျက်စီး
တာမွေမြို့နယ် အသောကလမ်းက သံပုံးတီးတဲ့ပြည်သူ ၇ ဦးကို စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်
လေတပ်ဦးစီးချုပ်မောင်မောင်ကျော် ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့ရှိ ရဟတ်ယာဥ်ပြပွဲကို ရောက်ရှိနေ
ကယားပြည်နယ် ဖားဆောင်းမြို့နယ်နဲ့ ဘော်လခဲမြို့နယ်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွား၊ ဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ
NUG အစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုရန် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များထံ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်အဖွဲ့ အိတ်ဖွင့်စာပေးပို့
မြဝတီအခြေစိုက် ၂၇၅ တပ်မှ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦး၏ ဇနီးဖြစ်သူ စစ်သားများက သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်လို့ သေဆုံး
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပန်းကြိုင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နေအိမ်မှာဓားနဲ့ထိုးခံရ
ဒီးမော့ဆိုမြို့မှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ စစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေ၊ စစ်သားများသေဆုံးမှုရှိပြီး စစ်ကား ၃ စီးမီးလောင်
မင်းတပ်မြို့တွင် စစ်တပ်က လျှပ်စစ်မီးနှင့် ရေဖြတ်တောက်ပြီးနောက် MPT ဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ထား
တရုတ်အစိုးရပိုင် Petro China ကုမ္ပဏီက စစ်ကောင်စီကို လေယာဉ်ဆီများတင်သွင်းရောင်းချနေ
စစ်ကောင်စီလက်ကိုင်တုတ် ကြံ့ဖွံ့ပါတီနဲ့ ကြံရာပါ ၂၄ ပါတီ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ပခုက္ကူမြို့နယ် မြို့စိုးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း ဆရာမအဆောင်မီးလောင်
ကျိုက်လတ်၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းက ဝန်ထမ်း ၂၇ ဦးအလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရပြီး အကြွေးပြန်ဆပ်ဖို့ပါ ဖိအားပေးခံနေရ
နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံးညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ပြီး အဖြေရှာကြဖို့ RCSS/SSA ပြော
မြန်မာ့အခြေအနေ တိုးတက်မှုမရှိပါက ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများရပ်ဆိုင်းဖို့ စဉ်းစားမည်ဟု ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြော
စစ်တပ်ကပစ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီးကျည်များ ထိုင်းဖက်ကျရောက်မှုအတွက် ထိုင်းစစ်တပ်သတိပေး
စစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီးများ ထိုင်းရွာအချို့မှာကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့လို့ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က ပြည်သူများကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်သွားမည်ဟုဆို
အာဏာရှင်လက်ပါးစေ UEC အနေနဲ့ ပါတီများဖိတ်ကြားထားမှု နိုင်ငံရေးရိုးသားမှုမရှိဟု ကယန်းအမျိုးသားပါတီ ပြော
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် YRTA ကို စစ်ကောင်စီက YRTC အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း
စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ မြန်မာသံအမတ်နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ရှုတ်ချ၊ နိုင်ငံထဲကနှင်ထုတ်ဖို့ ဂျပန်ရောက်မြန်မာများ ဆန္ဒပြ
ပြည်သူများထံက မီတာခများရအောင်ကောက်ရန် လက်ပါးစေများကို မင်းအောင်လှိုင်ညွှန်ကြား
ကရင်ပြည်နယ်၊ မူတြော်ခရိုင်အတွင်း စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးများနဲ့ နေ့စဥ်ပစ်ခတ်နေ
မြောင်မြို့နယ် ချောင်းဇင်းရွာသား ၁၀ ဦးခန့်ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား
နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ က သံတမန် ၁၀၀ ခန့်ပြန်လာရန် စစ်ကောင်စီဖိအားပေး
မြေအောက်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့က စားသောက်ဆိုင်များ မြန်မာဘီယာ ရောင်းချခြင်းမပြုရန် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း စစ်တပ်၏ လူမဆန်မှုများကြောင့် ကျဆုံးသူ ၈၀၀ ကျော်နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၀၀၀ ကျော်ရှိ
ကနီမြို့နယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် စစ်တပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ဖာပွန်ဒေသတွင် KNU တပ်မဟာ ၅ ကို စစ်တပ်နဲ့ BGF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်၊ စစ်သား ၃ ဦးသေဆုံး၊ ၁ ဦးဒဏ်ရာရ
မင်းတပ်မြို့မှာ စစ်သားများက စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ အယောင်ဆောင်ပြီး လာရောက်ပစ်ခတ်လို့ CDF အချို့ ဒဏ်ရာရ၊ ၁ ဦးကျဆုံး
မင်းတပ်က စစ်ရှောင်စခန်းကို စကစတိုက်ခိုက်၊ စကစ ၅ဦးခန့်သေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သက်သေများတွေ့
ကနီတိုက်ပွဲ PDFကစစ်ကား ၆စီးဖျက်စီး၊ ဒေသခံ ၁ထောင်ကျော် ထွက်ပြေးနေရ
မင်းတပ်မြို့မှာ CDF နဲ့ စစ်တပ် တိုက်ပွဲများဆက်လက် ပြင်းထန်နေပြီး နှစ်ဖက်အကျအဆုံးရှိ၊ ၆ ရက်သားအရွယ် ကလေးငယ်တဦး သေဆုံး
သိန္နီမြို့နယ် မိန်းပါးရွာမှာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တခုနဲ့ စစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ စစ်ကောင်စီအကြား စစ်ရေးတင်းမာလာ
ခန္တီးမြို့နယ်ရှိ နန်စီပွန်ကျောက်စိမ်းမှော်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီး စစ်တပ်က လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်
နန်စီပွန်တိုက်ပွဲ ဒုရဲအုပ်အမျိုးသမီးတဦး အပါဝင် ၉ ဦးခန့်ကို KIA ဖမ်းဆီးရမိ၊ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ မီးလောင်
ရန်ကုန်၊ သုဝဏ္ဏပန်းခြံအနီး အထကကျောင်းရှေ့ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး စစ်သား ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
ယမန်နေ့က ကယားပြည်နယ်ရှိ ၇ နေရာတွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့
ဖလမ်းမြို့တိုက်ပွဲတွင် စစ်သား ၆ ဦးသေဆုံးပြီး ၂ ဦးထွက်ပြေး
တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်နေသောကြောင့် ဒီးမော့ဆိုဒေသခံများ ဗုံးခိုကျင်းများ တူးနေရ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ခန္တီးမြို့က စစ်ကောင်စီ တပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA မီးရှို့ဖျက်ဆီး
သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် MyTel ကုမ္ပဏီရုံးခွဲရှေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
သထုံမြို့နယ် ကျိုက်ကော်ကျေးရွာ လျှပ်စစ်ရုံးရှေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ပဲခူးတိုင်း ဖြူးမြို့နယ်က စာသင်ကျောင်းများတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွား
ပဲခူးတိုင်း ဖဒိုနယ်မြေရဲစခန်းမှာ ဗုံးနှစ်ကြိမ်ပေါက်ကွဲပြီး ဂါတ်စာရေးတဦး ဒဏ်ရာရ
ပုသိမ်မြို့ ထွေအုပ်ရုံးအနီး ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
လှိုင်မြို့နယ်၊ မာလာမြိုင် ၉ လမ်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ပုသိမ်မြို့မှာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ လေယာဥ်ကွင်းဘေး ဗုံးပေါက်ကွဲ
ညောင်လေးပင်မြို့နယ် စမ်းကလေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နေအိမ် ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး ရာအိမ်မှူးသေဆုံး၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မိသားစုဝင်များ ဒဏ်ရာရ
မကွေးမြို့ အထက်တန်းကျောင်းနှစ်ခုအနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွား
မုံရွာမြို့ ဇောတိကကျောင်းအနီးရှိ အမှိုက်ကန်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး လူ ၂ ဦးသေဆုံး
မကွေးမြို့မှာ ယမန်နေ့က စစ်တပ်တပ်စွဲထားတဲ့ အထက ၁၄ တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး စစ်သားများ ဒဏ်ရာရ
မူဆယ်မြို့နယ် မိုင်းယု ၁၀၅ မိုင် ကားကြီးကွင်းမှာ ဗုံး ၃ လုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
တာမွေမြို့နယ် ယုဇနပလာဝင်​ပေါက်အနီး ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ညနေပိုင်းတွင် တောင်ကြီးမြို့၌ နေရာအနှံ ‌ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်
PDF. NUG . CDM
ချင်းပြည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်မြို့ ရဲစခန်းက ရဲဝန်ထမ်း ၁၂ ဦး CDM ပြုလုပ်၊ ရဲများလုံခြုံရေးအတွက် CDF တာဝန်ယူမည်
ပုသိမ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က CDM ဝန်ထမ်းများအား ဂုဏ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြန်
မိုးကုတ်မြို့တွင် CDM ကျောင်းဆရာတဦး၏ ဖခင်ဖြစ်သူကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ကျောင်းသားများ CDM ပါဝင်ရန် မြောင်းမြ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံသမဂ္ဂတိုက်တွန်း
ယမန်နေ့က ဒီးမော့ဆိုမြို့ရှိ စစ်ကောင်စီဂိတ်စခန်းတခုကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်က တိုက်ခိုက်ပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီး
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ဒေါတဝီကျေးရွာဂိတ်ကို PDF တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၊ ရွာသား ၂ ဦးကို စစ်တပ်က ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်
ချင်းပြည်နယ်၊ ရေဇွာမြို့မှ Non CDM ဝန်ထမ်းများ ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ကြရန် CDF သတိပေး
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီCRSH က ဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ခံများ ခန့်အပ်
စဥ့်ကိုင်မြို့ တရုတ်-မြန်မာဂတ်စ်ပိုက်လိုင်း လုံခြုံရေး ရဲ ၃ ဦး အသတ်ခံရမှုအတွက် ပြည်သူ ၉ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
မိုးကောင်းမြို့ နေအိမ်တခုမှ ကားတစီးကို စစ်သားများ ဓားပြတိုက်ယူဆောင်သွား
ရန်ကုန်တိုင်း NLD အတွင်းရေးမှူး လှည်းကူးမြို့တွင် ဖမ်းဆီးခံရ
ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ ကစားမည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်း ဂျပန်နိုင်ငံရောက်ရှိ
ကလေးမြို့နယ်၊ ရာဇဂြိုလ်ရွာက စစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အသတ်ခံရ
မကွေး ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က စစ်တပ်ကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ တိုက်ခိုက်သွားမည်ဟု ကြေညာ
ပြည်သူ့ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရေး ဆွေးနွေး
ရွေးကော်နဲ့တွေ့ပြီးနောက် ပြည်သူ့ပါတီမှ နုတ်ထွက်သူများလာ
ကနီမြို့တွင် စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်လို့ ပြည်သူ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
ကလေးမြို့က ခရိုင်/မြို့နယ်တရားရုံး မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား၊ သက်သေခံ ကားများနဲ့ ဆိုင်ကယ်များ မီးလောင်ပျက်စီး
ဂြိုလ်တုစလောင်းများလက်ဝယ်မထားကြဖို့ ကျောင်း၊ ကောလိပ်နဲ့ တက္ကသိုလ်များကို စစ်ကောင်စီ အမိန့်ပေး
ကွတ်ခိုင် - မူဆယ်လမ်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့အထွက်တွင် ခရီးသွားများကို စစ်တပ်က စစ်ဆေးမှုများလုပ်နေ
ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်က စိုက်ပျိုးရေးဆေးဆိုင်တခု မီးရှို့ခံရ
တောင်သာမြို့နယ်တွင် အငြိမ်းစား ကျောင်းဆရာတဦးကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီး
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်မှာ မူလတန်းကျောင်းတကျောင်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ပန်းတနော်မြို့နယ် မိမ္မကျေးရွာ တိမ်းရှောင်နေသည့် NLD ခေါင်းဆောင်၏ မိသားစုဝင် ၂ ဦးကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နောင်ချို၊ သီပေါ၊ ကျောက်မဲနှင့် နမ္မတူမြို့နယ်များတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်း တိုက်ပွဲများဖြစ်နေလို့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ ၅၀၀၀ ကျော်ရှိလာ
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်း စစ်တပ်၏ လူမဆန်မှုများကြောင့် ကျဆုံးသူ ၈၁၂ ဦး နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ၅၃၅၄ ဦးရှိ